Nnukwu ngwongwo nke China API 602 esorola agbaze agba agba agba agba
Newsway Valve Company bụ ọkachamara na-emepụta valvụ API 602 esorola agba bọọlụ agbagọ, anyị nwere ike ịwepụta 40000 setịpụrụ API 602 Forged Steel Globe Valves kwa ọnwa. Newsway Valve nwere nnukwu ngwongwo nke valvụ iji kwado ndị ahịa ịbuga n'oge ọ bụla. Product aha: esorowo ígwè Glob ...
Oldkpụzi usoro na nkọwapụta arụmọrụ nke ngwugwu valvụ
1. Graphite Mbukota ụdị nkọwa E nwere ndị na-esonụ 3 ụdị fillers ọtụtụ ndị na-eji na valves The mbukota eji na oru ngo a bụ otu-oghere ụdị na Ọgụgụ 1 na mgbanaka-yiri mbukota na ọgụgụ 3. Ezigbo foto ndị dị ka ndị a: Ọgụgụ 1 Otu mmeghe na-emepe emepe Fi ...
Usoro nchekwa nke ngwugwu valvụ: Ndị na-ekpo ọkụ nke oru a bụ nke ihe abụọ a: PTFE na eserese dị nro. Mgbe echekwara ya, kaa ya akara n'ime akpa ma ọ bụ igbe. Chekwaa nke ọma na ụlọ nkwakọba akọrọ na ventilated, zere ìhè anyanwụ. Lezienụ anya ventilashion n'oge nchekwa ogologo oge, na contr ...
Na sistemụ na-ebugharị mmiri, valvụ bụ ihe nchịkwa dị mkpa, nke nwere ọrụ nke iwu, ntụgharị, mgbochi ịghaghachi azụ, ịkpụ, na shunt. A na-eji valvụ eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo. Igwe okpomọkụ dị elu bụ ụdị a na-ejikarị na valves. Nkọwapụta ya ...
site ha na 21-06-12
Bọọlụ eletrik eletrik nwere ihe ntụgharị 90 ogo. Ọkpa ọkpa bụ okirikiri nke nwere okirikiri site na oghere ma ọ bụ ọwa na-agafe na mpaghara ya. A na-ejikarị valvụ bọọlụ eme ihe na pipeline dị ka valvụ bọọlụ eletrik iji bepụ, kesaa ma gbanwee usoro ntụgharị nke ọkara. Ọ ...
Newsway Valve ụlọ ọrụ elu okpomọkụ bọl valvụ bụ a metal akara Ọdịdị, akara akara bụ metal ka metal akara, metal akara mgbanaka ka metal akara nwere ike gbanwere, igwe anaghị agba nchara efere na graphite ọtụtụ ndị mejupụtara efere akara mgbanaka ka metal akara. Na mgbakwunye na electric mbanye, na ike-kaa akara butterfl ...
N'ime ụzọ atọ mbụ nke 2016, akụ na ụba mba na-aga n'ihu na-eto n'ike n'ike, yana mmụba GDP nke 11.5%, nke nyere ahịa valvụ bọọlụ ezigbo omume. Otú ọ dị, ọnọdụ nke ikpo ọkụ akụ na ụba na-aga n'ihu, na enwere nsogbu ụfọdụ pụtara ìhè nke nwere ike ime ka akụ na ụba ghara ịdị ọkụ ọkụ ...
Igwe anaghị agba nchara 316 Ball Valve ntuziaka ịzụta
Waylọ ọrụ Newsway Valve 31lọ ọrụ 316 igwe anaghị agba nchara nwere mkpụrụ akụkụ abụọ na atọ. A na-ejikọ etiti etiti ahụ site na bolts na ejiri akara nke nickel mee ihe akara ahụ. E nweghị ndị na PTFE biarin na elu na ala valvụ ị ga, mbenata esemokwu na-azọpụta ọrụ opera ...
Nkwupụta a kpọrọ "Global Flange Gate Valve Market" bụ otu n'ime mgbakwunye kachasị mkpa ma dị mkpa na ebe nchekwa ihe nyocha nke ahịa NSW. Ọ na-enye zuru ezu nnyocha na analysis nke isi akụkụ nke zuru ụwa ọnụ flanged ụzọ ámá valvụ ahịa. Onye na-enyocha ahịa ...
API 602 GLOBE AHAL
API 602 GLOBE VALVE Newsway Valve Company API 602 ụwa valves nwere atụmatụ atọ bonnet. Nke mbụ bụ ụdị ihe nkwụnye, nke jikọtara ya na concave na convex, na-eji eriri igwe anaghị agba nchara na gasị gasị na-agbanwe ọnya. A pụkwara iji njikọ mgbanaka dịka achọrọ. Ndị ...
Igwe anaghị agba nchara ọnụ ụzọ ámá valvụ oghere na mmechi akụkụ nke igwe anaghị agba nchara n'ọnụ ụzọ ámá valvụ bụ ọnụ ụzọ ámá, na ije direction nke ọnụ ụzọ ámá bụ perpendicular ka ntụziaka nke ọmụmụ. Ọnụ ụzọ ámá igwe anaghị agba nchara nwere ebe mkpuchi abụọ. Ihe mkpuchi abụọ a nke ihe eji eme ihe ...
Nkọwa na nyocha nke ntuziaka na-ese n'elu mmiri
Ntuchi obi, bọlbụ urukurubụba na valvụ nkwụnye bụ otu ụdị valvụ ahụ. Ihe dị iche bụ na akụkụ mmechi nke valvụ bọl bụ bọọlụ, nke na-agbagharị gburugburu etiti etiti nke ahụ valvụ ahụ iji nweta oghere na mmechi. A na-ejikarị valvụ bọọlụ ebipụ, kesaa ma gbanwee ...
Large yiri nkata nke China API 602 esorowo S ...
Kpụzi usoro na arụmọrụ descriptio ...